DISTRIKAN’I TSARATANANA : Dahalo telolahy maty voatifitry ny zandary
Anjakan’ny tsy filaminana tanteraka ny any Tsaratanàna. Distrika ampijalian’ny asan-jiolahy ity farany. 6 novembre 2018
Samy mitranga any an-toerana ireo karazana asan-jiolahy na ny halatr’omby na ny fakàna an-keriny. Raha nangingina na niatoato kely ny asa ratsy ataon’ireo mpaka an-keriny niandahy niambavy mihitsy dia ny alahady 4 novambra teo indray no nisehoana halatr’omby tany an-toerana, izay niafara tamin’ny famoizana aina telo nandritra ny fanarahan-dia natao an’ireo omby very sy ireo olon-dratsy nitondra azy.
Dahalo fitolahy no nanafika tanàna kely tao amin’ny kaominina ambanivohitra Sarobaratra, Distrikan’i Tsaratanàna ny alahady maraina teo.
Omby miisa 12 no lasan’ireo andian-dahalo tamin’izany. Tsy niandry ela anefa fa avy hatrany dia nampandre ny zandary ny tompon’omby taorian’ny fanafihana ka raikitra ny fanarahan-dia.Tsy lasa lavitra akory ireo mpandrava dia tratran’ireo mpanara-dia niarahan’ny fokonolona sy ny zandary any an-toerana. Tsy nanaiky mora anefa ireo mpangalatra omby teo anatrehan’ireo vatan-dehilahy maro mpanara-dia. Raikitra araka ny fifandonana teo amin’ny andaniny sy ny ankilany ka nirefodrefotra ny basy. Nandritra ny fifandonana dia maty voatifitra ny dahalo miisa telo. Raha nahita izany ireo naman’ireo olon-dratsy dia namela ny ireo nangalariny ka nanao tongotra an-katoka nitsoaka ireo mpanara-dia.
Tafatsoaka noho izany ny olon-dratsy miisa efatra sisa velona. Tafaverina amin’ny tompony daholo ny omby noentin’ireo dahalo.
Nodimandry teo amin’ny faha-63 taonany i Jean Robert VERY OLOMANGA ANTSIRANANA (226) 12 juin 2019 Tratran’ny mpifaninana taminy nangala-bato i Nepatraiky Rakotomamonjy KANDIDA DEPIOTE IHOSY (224) 12 juin 2019 Miaramila miisa 34 naiditra am-ponja vonjimaika HETSIKA FAMPANDRIANA FAHALEMANA (197) 12 juin 2019 Saron’ny zandary tao an-tranony ireo poketran’olona voaendaka JIOLAHY RAINDAHINY TRATRA TENY ITAOSY (168) 11 juin 2019 Mandà ny endrika tsindry rehetra atao aminy ny Hcc VOKA-PIFIDIANANA OFISIALY (161) 11 juin 2019 Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora LEHILAHY TRATRA NANGARONA NY PAOSIN’ NY NAMANY (149) 13 juin 2019